Falanqaynta Semalt Web
Lahaanshaha shabakadahaagu inay gaaraan awoodeeda oo dhan ma aha wax fudud oo ay u muuqan karaan. Waana hubaa inaad hadda gartay taas. Waxay qaadataa kormeer joogto ah, shaashad, iyo falanqayn si loo hubiyo inaad wax u qabsaneyso sida saxda ah. Waqtiyo badan oo dib-u-fiirinta noocan oo kale ah ayaa ka fiican marka la sameeyo xirfadlayaal khibrad u leh ogaanshaha waxa laga raadsado bartaada internetka. Ganacsade ahaan, waxaan hubnaa inaad rumeysan tahay inay fiicantahay inaad wax qabatid adigu. Si kastaba ha noqotee, qofna ma jiro jasiirad. Si lagaaga dhigo mid aad dareento fiicnaan, Semalt, waad la socotaa dhamaan tillaabooyinka aan qaadno si aan uga dhigno shabakadaada mid wanaagsan.
Marka ha ka fekerin inaad ku soo dejiso mareegahaaga xakamayn ee aad u qaadatid iskaashi. Qaabkaan, waxaan si wanaagsan ugu wareejin karnaa aragtidaada websaydhka oo aan hubin karnaa inaad abuur ahaan horseed u horseed ka sameysan karto.
Si loo fahmo aasaaska u fiicnaanshaha SEO, waxaan soo jeedin lahaa inaad sahamiso barteena si aad waxbadan uga barato. Waxaan haynaa waxyaabo badan oo ka kooban waxyaabo waxbarasho oo kaa caawinaya inaad ogaato sidaan kuu caawin karno.
Halkan, waxaan ka wada hadalnaa dhammaan aaladaha loo baahan yahay falanqaynta dhameystiran ee websaydhada. Tan kuma koobna oo keliya kuwaaga laakiin sidoo kale tartamadaaga. Tani waxay ogaaneysaa adeegsiga ereyga-furaha boggaaga, sidoo kale waxay keydisaa ereyadaada furaha ah. Waxaan sii wadnaa inaan ku tusno boggaaga wadista wadista (kani waa bogga ay dadka badankood booqdaan), waxaanan go'aansanay mawqifkaaga natiijada raadinta dabiiciga ah.
Markaan sahaminno tartankaaga, waxaan ogaan doonnaa waxaad u baahan tahay. Daraasadda cabbirrada tartamayaasha waxay noo oggolaaneysaa inaan fahamno sababaha ka dhashay tirada taraafikada kordhaysa. Kadibna waxaan u adeegsaneynaa aqoontaan bartaada.
Waxaan ku faanaa sharaxida iyo jebinta waxyaabaha adiga kaa caawiya inaad fahanto. Ma jeclaanno "Waan kuu jeedaa dariiqa." Taabadalkeed, tan waxaan u qaadnaa sidii iskaashi. Sidan, waxaan labadayaduba ugu qaseynaa kiimikada sheybaarka "qaab ahaan", umana dayno waxyaabaha madadaalo ah oo dhan ardayda maskaxdu.
Qeexid ahaan, SERP waxay u taagan tahay Bogga Natiijada Mashiinka Raadinta. Kuwani waa bogag ay soo bandhigeen matoorada raadinta marka isticmaale ama kiiski Semalt uu codsado. Ujeedada ugu weyn ee natiijadan ayaa ah in la fahmo sida hufan ee ereyada muhiimka ah loo isticmaalo websaydhkaaga.
SERP waa kaarka warbixinta boggaaga. Waxaa ka mid ah cinwaan, iskuxir boggaaga internetka, iyo sharraxaad kooban. Sharaxaani waxay muujineysaa halka ereyada muhiimka ahi ay u dhigmayaan waxa ku jira bogga. Tan macnaheedu waa inaadan haysan bog internet ah oo ku saabsan iibka baabuurta, iyo furahaaga ereyga ahi waa Fis, Ocean, Aquarium, iwm. Midkastoo ereyga furaha ah ee aad isticmaaleysid wuxuu u baahan yahay inuu la xiriiro adeegyada aad bixiso. Haddaysan ahayn sidaas, bartaada internetka waxay sii wadi doontaa soo jiidashada dhagaystayaasha qaldan.
Faahfaahinta ku jirta warbixintan awgeed, badanaa waxay ku soo baxdaa dhowr bog. In kasta oo aad xaddidi karto waxa la soo bandhigo, waxaan door bidnaa in si buuxda loo galo, adoo ka gudbaya dhammaan T oo aan dhibcaha I ee.
Marka la eegayo natiijadan, bogga koowaad wuxuu leeyahay macluumaadka ugu habboon. Markaad u dhaqaaqayso dhamaadka warbixinta, muhiimada xogta ay ka kooban tahay way yaraaneysaa ilaa inta aad ka go'antahay inaad ka sii go'do. Sida xayeysiinta ama nolosha waxkastoo nolosha ah, waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa marka hore yimaada.
Ugudambeyn, SERP waxay ku tusineysaa booska ay websaydhkaagu ka qaadaneyso fasalka bogagga ee bogagga. Iyo maadaama aad curiso jihooyin ahaan adoo isticmaalaya ereyada furaha ah, waxaad fahmi doontaa waxaad qaldameyso iyo waxaad u baahan doontaa inaad la qabsato. Adoo garanaya waxa qaladka ah, waxaan ognahay halka aan ka shaqeyn karno.
Waxaa jira afar qaybood oo ah 'SERP'. Waxaan leenahay xayeysiimaha raadinta oo lacagta ah, natiijooyinka raadinta dabiiciga ah, natiijooyinka raadinta deegaanka, iyo raadadkii la xiriira.
Xayeysiinta raadinta lacagta ah: kani waa hab lagu helo taraafikada qaldan. Halkaan, waxaad ku bixineysaa Google si ay u wanaajiso boggaaga adigoo soo jiidanaya dareenka daawadayaasha. Qaabkaan, bartaada ayaa heleysa aragtiyo, laakiin tani had iyo jeer kuma heleyso inaad hogaamiso. Iyo, ma jiro wax dammaanad ah oo ah in markaad joojiso bixinta xayeysiisyadan, aad sii wadidoontid isu socodka sare ee bartaada.
Natiijooyinka raadinta dabiiciga: kani Semalt ayaa ku qornaa dhan. Tani waa marka aad u adeegsato SEO si aad ugu sawirto taraafikada goobtaada si dabiici ah. Natiijooyinka baarista ee dabiiciga ah waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo la aamini karo. Iyada oo adeegsanaysa xirfadleyaal SEO ah, garaacaaga ayaa badanaa kujira safka sare ee bogagga sare ee Google. Tani waxay siineysaa websaydhka fursad wanaagsan oo loogu beddelo badhamadaas macaamiisha.
Natiijooyinka raadinta maxalliga ah: halkan, waxaad ku aragtaa liis, khariidad, iyo xiriirada ganacsiyada ku dhex jira raadinta raadinta. Raadinta raadinta waxaa lagu go'aamiyaa tiro xaalado ah iyo doorbidka isticmaaleha. Tani waa sababta ay muhiim ugu tahay shirkadaha inay sameystaan bogga ganacsiga Google.
Raadinta laxiriirta: Raadinta laxiriirta waa la iska indhatiraa inta badan. Kuwani waa sanaadiiqda yar ee aad ku aragtid qeybta hoose ee bogga natiijada ka dib markaad wax raadiso. Kuwani waxaa loo sameeyay iyada oo lagu saleynayo furayaasha ereyada isticmaaley sanduuqa raadinta.
Si kastaba ha noqotee, SERP ee matoorada raadinta weyn sida Google, Bing, iyo Yahoo ayaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan dhowr astaamo natiijooyin oo la xoojiyay. Waxay ka kooban yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin tayada xabadkaaga, sawirrada, khariidadaha, sanduuqa jawaabta qeexitaanka, iwm.
Sidoo kale loo yaqaan 'string search string', kani waa erayga ama xarig ee ereyada isticmaaleyaashu ku qoraan santuuqa goobidda. Ma ogtahay sida aad wax uga baari karto waxkastoo Google ah? Hagaag, waxaa jira dhowr siyaabood oo isticmaale uu raadsan karo, laakiin ereyada furaha ayaa wali la ilaaliyaa.
Laakiin haddii matoorada raadinta ay ku tiirsan yihiin waxa uu isticmaale u adeegsado kaligiis, goobo badan ayaan waligood arki doonin iftiinka maalinta. Marka, makiinadaha raadinta waxay wax ka beddelaan algorithm-ka iyo guud ahaanba sirdoonka mashiinka raadinta.
Su'aalaha raadinta hadda dib ugama suurtoobi karo iyadoo lagu saleynayo oo keliya waxa isticmaaleygu baarayo. Taas bedelkeed, shirkadaha waxay jecel yihiin Google qodobka kale ee isbadallada kale. Waqti dheeri, macnaha guud wuxuu ka koray kaliya ereyada u dhigma illaa fikirka caqliga leh. Sidan, ereyada qaldan ayaa la saxay, sidoo kale ereyada muhiimka ah ee la xiriira ayaa sidoo kale la muujiyaa.
Nuxurka ayaa ku tusaya sida Google ula dhaqmayso degelkaaga. Ma u tixgeliyaan inay yihiin il gaar ah ama miyaanay ahayn? Halkan, waxaad ka hubin kartaa boqolkiiba inta saxda ah ee kaliya sida ay u gaar tahay waxyaabahaagu. Dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan gaarno ama ka duwanaano, oo astaantan ayaa naga caawineysa inaan taas gaarno. Nuxurka, waxaad ku baran doontaa qaybaha qoraalkaaga loo qorsheeyay, oo waxaad fursad ugu heleysaa isha aasaasiga ah.
Ma jiro qof jasiirad ah, markaa filan inaad aragto waxoogaa khiyaamo ah. Waa shaqadeena, si kastaba ha noqotee, inaan ka dhigno qoraalkaaga mid gaar ah oo gaar ah intii suurtagal ah. In kasta oo aad xog ka soo uruuriso ilo kale, waxaad u baahan tahay inaad adigu adigu iskaa u sameyso, waxoogaa isku dar ah naftaada iyo shirkadaba ku dar. Tani waxay wax u tareysaa si looga caawiyo akhristayaashaada inay si wanaagsan ula xiriiraan shirkaddaada iyo astaantaada.
Iyada oo la adeegsanayo adeegsadeena-saaxiibtinimo-saaxiibtinimo, waxaan ku maareyn karnaa shabakado badan markiiba. Adigoo gudbinta aagaaga ama URL-yadaada Google, waxaan ula socon karnaa wax qabadkooda si sahlan. Adiga oo ah maamulaha shabakadda Google, waxaad haysataa dhammaan aaladaha aad ugu baahan tahay inaad la socoto oo aad ku hagaajiso goobtaada. Si aad ugu raaxaysato adeegaha shabakada Google, waxaad marka hore u baahan tahay inaad sameysato koonto. Maamulaha webka Google waa aalad muhiim u ah guusha degel kasta. Waxay u egtahay inay ku tusinayso sida shabakadaadu u shaqeyso taleefannada iyo kiniiniyada, aad aragto bogag kale oo kugu xiraya adiga, waxayna qiimeyneysaa weydiimahaaga.
Sidee maamulaha webka Google u kormeeri karaa waxqabadka websaydhkaaga?
Waxay xaqiijineysaa in Google ay marin u heli karto waxa kujira bartaada internetka
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto oo aad ka saarto bogagga shabakadahaaga
Waxay kaa caawineysaa inaad qiimeyso boggaaga internetka oo aad hesho qaabab aad ku bixiso khibrad wanaagsan akhristayaashaada.
Waad ilaalin kartaa boggaaga adigoon carqaladeyn jiritaanka natiijooyinka raadinta.
Waad soo ogaan kartaa oo tirtiri kartaa dhibaatooyinka bulsheed ama dhibaatooyinka spam ee ku dhici kara dildilaaca haddii la raadinayo qaab kale.
Maamulaha webka Google waa aalad muhiim ah marka la falanqeynayo mareegaha. Waxay ina tusaysaa meesha iyo waxa la sameeyo.
Tani waxay falanqeyneysaa sida dhakhsaha leh ee boggaga shabakadahaagu u shaqeeyaan. Google wuxuu u adeegsadaa falanqayntan inuu go'aamiyo haddii boggagaaga ama boggaaga uu buuxiyo shuruudaha Google. Halkan, waxaa sidoo kale lagu tusi doonaa khaladaadka jira ee aad u baahan doontaa inaad ku hagaajiso degelkaaga iyo sidoo kale sida guud ahaan loo hagaajiyo boggagaaga.
Caadi ahaan, waxaad doorbidi laheyd degel deg deg u boggag bogag dhakhso leh. Wax kasta oo ka badan 10 ilbidhiqsi waxay bilaabaan inay dareemaan maalin dhan. Tani waa sababta haysashada boggaga deg-degga ah ee xamuulka ah ugufiican adiga iyo daawadayaashaada. Google ayaa raba in adeegsadeyaashu ay ku farxaan, taas oo macnaheedu yahay inay u baahan yihiin degello deg deg ah. Marka shabakadaadu waxay ubaahantahay inay ahaato sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan Google si ay uxilsaarto shabakadaada. Waxaanna uga baahanahay tan shabakadaada inay ka soo muuqato raadinta ugu sareysa, taasoo siineysa ganacsigaaga fursado badan oo uu ku koro.